Tevedza ese egore reEurovision nekuda kweayo app yeApple | IPhone nhau
Zvingave sei zvikasadaro, Eurovision zvakare ine yayo application kune iOS. Iko hakuna chiitiko, bhaisikopo kana vhidhiyo mutambo unoshaiwa iwo wega mashandisirwo, zvinosuruvarisa mazhinji ndeemhando inokatyamadza, asi iyo Eurovision application iri kunyatso shandiswa pane izvi. Nekuda kwekushandisa kwayo kwepamutemo isu tichakwanisa kuteedzera kusvika kuminiti ruzivo rwese uye nhau dzeiyi yazvino vhezheni yeEurovision. Rimwe zuva zvikamu zvakapfuura zvakaitwa, uye nekuda kwekushandisa kwayo kweIOS tichakwanisa kuvhota vatambi vedu vatinofarira nenzira iri nyore.
Aya ndiwo madanidziro, anonzi Evanogold.tv afunga kutiratidza izvo zvavari hunhu hwekushandisa kwayo:
- Kuongorora kwazvino nyaya, mapikicha uye mavhidhiyo.
- Matchmaker: tsvaga kuti ndeipi gumi yeEurovision inokodzera iwe zvakanyanya.
- Music Store (album yakaburitswa Kubvumbi 15, 2016), ikozvino zvakare neye karaoke vhezheni yenziyo yega yega.
- Chitoro Chekutengesa, kwaunogona kutenga zvako zviyeuchidzo zveEurovision.
- Tevera ese magala anorarama: neruzivo rwakadzama nezve iyo gala, maartist, nziyo uye nyika.
- Mimwe mitauro miviri yekuwedzera: Spanish neFrance.
- Yakadzama profiles yemubatanidzwa: sangana nevanyori.
- Mafirita e selfies: ipa mifananidzo yako kubata kweEurovision.
Zvirokwazvo iko kushanda kwakakwana. Zviripachena iko kushanda kwepasirese kune chero chinhu cheIOS, zvese iPod Touch, iPhone uye iPad. Inotora zvishoma, inongova 20,2 MB chete uye kunyangwe iyo App Store ichiratidza kuti inowanikwa muChirungu chete, chokwadi ndechekuti zvirimo zvakanyatso dudzirwa muchiSpanish. Usapotsa zvachose chinhu cheEurovision gore rino, sezvo ichavewo yekutanga kuridzwa kutepfenyurwa munguva chaiyo muUnited States of America paterevhizheni.Tichazopedzisira takunda?
Rwiyo rweEurovision Rwiyovakasununguka
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Tevedza ese egore reEurovision nekuda kweayo app yeApp
IOS 10 pfungwa ine majeti uye yakagadziriswazve multitasking, pakati pezvimwe zvinhu